Maxaa kaaga baxay Xafladii caleemo saarka madaxweynaha J.land | Daraawiish.com
Maxaa kaaga baxay Xafladii caleemo saarka madaxweynaha J.land
By Daraawiish / September 13, 2015
September 13, 2015 // D M5 // Fatwa online, Media News, News705 Views
Xafladii caleemo saarka madaxweynaha J.land: Ishii buktaay ku bikaacso!
Shalay waxay bulshada J.land iyo guud ahaan umadda soomaaliyeed inta samaha jecel u ahayd maalin taariikhi ah, aadna ugu weyn guud ahaan xasuusta bulshada soomaaliyeed. (nabad diid tirada ha ku darsan, soomaalina ma aha)
Waa maalin umadda soomaaliyeed min raascaseyr ilaa raaskambooni ku kulantay Kismaayo, welibana si niyad sami leh. ujeedada loo kulmayna waxay ahayd, u dabaal degga maadxweynaha la doortay ee J.land, mudane Axmed Maxamed Islaam (axmed madoobe).
Waxay ahayd munaasabad ay ka soo qeyb galeen in ka badan 40 dal oo caalamka ah. Shakhsiyaadki khudbadaha ka jeediyay waxaa ka mid ahaa Madaxweynaha Dowlada Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud R/Wasaarr Cumar, Madaxweynaha J.land Axmed Maxamed , Madaxweynaha P.land Abdiweli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Maamulka K.Galbeed Shariif Xasan, Madaxweynaha G.mudug Cabdikariim, Wasiirka Arimaha dibada Itoobiya Tedros adhanom, Wakiilka Q.Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay, Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Dowladda Kenya, hadana xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Kenya, lagana soo doorto degmada Gaarisa Yuusuf Xaaji, Aadam Barre Ducaale oo ah gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya.
Waxaa kaloo goob joog ahaa wakiilka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afeey, Xubno ka socday Dowladaha Itoobiya iyo Kenya, Safiirada Turkiga iyo Imaaradka, xibna ka socday beesha caalamka, Boqolaal Marti dharaf ah oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib, iyo weliba kooxaha fanka. Waxaa goobta ku sugnaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka.
Hadaan si kale u dhigno shalay waxay ahayd maalin caalamka si hagar la’aan ah isu bar’bar taagay dowladda J.land iyo shacabkeeda. Waa maalin caalamka iyo soomaalidaba si isku mid ah u qireen xalaal nimada iyo hufnaanta lagu soo dhisay dhammaan heyadaha dowladda J.land, sida golaha shacabka oo ah heyadda soo dooratay madaxweynaha dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba u bogeen caleemosaarkiisa.
Waa maalin J.land ka gudubtay ku meel gaar, una gudubtay dowlad rasmi ah. Waa maalin uu hawada soo gelay Muuqbaahiye J.land leedahay, lagana gudbay baahidii warbaahineed.
Waa maalin J.land fidisay gogol soomaaliyeed, gogoshaasoo looga tashanayo aayaha umadda soomaaliyeed, taasoo maantaba si toos ah uga furantay caasimadda KMG ee J.land.
Akhristow ku darso heerkan ay maanta mareyso J.land waxay gaartay laba sano oo socod barad ah, ku meel gaar ah, dagaal joogta ahna uu kaga socday dhinacyo badan. Maxaad filan kartaa 4-ta sanee soo socota!
Waxba yaanan war badan kugu daaline, wacdaradii shalay ka dhacday Kismaayo waxay tusineysaa ahamiyadda gaarka ah ee ay J.land u leedahay gobolka iyo guud ahaan caalamka, sidoo kale miisaanka iyo heerka ay maanta mareyso dowladnimada gaamurtay ee J.land.
Isku soo xaairiyoo, wacdaradii shalay ka dhacday Kismaayo, mar waxay cadeyn iyo markhaati u tahay amaanka J.land ka jiro, iyo J.land awood u leedahay marti gelinta shirar caalami ah. Waxaa kalooy munaasabaddan mideysay, hal mikrofoona u wada dhiibtay siyaasiyiin soomaaliyeed oo qabay aragtiyo kala duwan, taasna waa guul u soo hoyatay diblumaasiyadda J.land.
Munaasabadan lagu caleemosaaray M. J.land oo ahayd midaan horay uga dhicin geyiga soomaalida, waa miday ku faani karaan shacabka J.land. Sidoo kale waxay miseysay soomaalida qeybaheeda kala duwan, marka laga reebo Prof. Jawaari.
← THOUGHT OF THE DAY: Murtida maanta
DAAWO Safiirka Somalia ee Talyaaniga Danjire Janaral Muuse Xasan oo arimo xasaasi ah ka hadlay →